MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE SAINT BERMASTIFF - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Saint Bermastiff
Saint Bernard / Mastiff ey isku dhafan oo isku dhafan
'Kani waa sawirka Bowser the Ingiriisi Mastiff / St Bernard isku qas da'da 1 sano iyo 160 rodol. Hooyadiis waxay ahayd qof timo dheer leh oo St. Bowser si aad uwanaagsan ayuu udhaqan yahay, jilicsan yahay dulqaad badan Wuxuu aad ula shaqeeyaa eeyo kale oo nooc kasta leh, edebna wuu la leeyahay bisadaha . Bowser waa eey caajis badan, oo had iyo jeer jecel inuu fadhiisto, xitaa da 'yar. Bowser sidoo kale waa ham, oo wuxuu jecel yahay inuu noqdo xarunta dareenka. Bowser wuxuu kaloo ku adkeysanayaa inuu sariirta la seexdo dadkiisa, wuuna qayliyey si xoog leh! Maxaa yeelay isagu waa a nooc Rafaa , waxay ahayd muhiim Bowser inuu ahaado tababaray isagoo da 'yar, halka cabirkiisu wali la maamuli karo. Bowser waxaa la baray, sida Cesar Millan wax u baro, in dhinac mari ama gadaashiisa milkiilayaashiisa , oo aan hortooda ahayn, taas oo si aad ah muhiim ugu ah nooc weyn. Intii uu baranayay tan, Bowser wuxuu xirtay boorsada dhabarka si uu u dareemo inuu haysto shaqo muhiim ah oo ku saabsan socodkiisa. Hadda, qof weyn, Bowser waa qof edeb badan oo xarkaha xitaa ilmaha seddex-meelood meel culeyskiisa wuu ku socon karaa. '
Saint Bermastiff ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa St Bernard iyo Mastiff . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Thor cunuga yar ee Saint Bermastiff 3 bilood jir ah— Biyo xireenka 'Thor waa' AKC CH Bloodline Saint Bernard. Sifirkiisu waa 200 rodol oo AKC ah oo lagu beddelay britlele English Mastiff. Ciyaalku waxay culeyskoodu ahaayeen qiyaastii 50-60 lbs. da'da 3 bilood. Dhammaan ardayda waxay leeyihiin jaakad jilicsan oo liin-dhanaan ah ama fawn leh dhar madow oo ka koreysa midabka salka, sanduuqyo cad, sharaabaadyo cadcad qaarna waxay leeyihiin olol yar oo cad. Waxay leeyihiin dabeecad fantastik ah, waana ilaaliyaal wanaagsan. '
'Bowser wuxuu culeyskiisu ahaa qiyaastii 160 rodol hal sano, ugu dambeyntiina wuxuu bartay inuu noqdo mid qurux badan inkasta oo uu le'eg yahay. Bowser horey ayaa loogu kalsoonaan karaa da'daan inuu noqdo keligaa laga tegey leh guryo bilaash ah, taas oo ah wax fiican maxaa yeelay way adkaan doontaa in la helo sanduuq ku habboon isaga. Isaga ma calalin on alaabta, ciidda guriga , ama soo bandhigto wax kale u janjeera wax burburin , xitaa markii keligaa laga tago maalintii oo dhan. '
'Bowser (aka xayawaanka ugu weyn abid) - aabihiis waa daahir Mastiff, hooyadiisna waa safiir Saint Bernard.'
'7 bilood gudahood, Bowser wuxuu culeyskiisu ahaa 125 rodol, waana mid aad u dhib badan. Si dhakhso leh ayuu u korayay!
'Markii Bowser uu ahaa 4.5 bilood, wuxuu culeyskiisu ahaa 80 rodol. oo wuxuu ka qalin jabinayey fasalkiisii ​​ugu horreeyay ee addeecid. Bowser ayaa gabi ahaanba ahaa dheriga loo tababaray da '.
'Markii Bowser uu jiray 8 toddobaad, wuxuu durba miisaamay 35 rodol. Wuxuu ahaa eey aad u macaan oo taxaddar badan, kana baqa waddooyinka iyo jaranjarooyinka. Wuxuu sidoo kale doonayay inuu afka saaro wax walba, kabahana waa in la dhigaa meel aysan gaarin Bowser.
Bowser the St. Bernard / English Mastiff mix puppy at 8 toddobaad jir
Bowser the St. Bernard / Ingiriisi Mastiff isku dhafka ah eey yar oo jira 8 toddobaad
Bowser the St. Bernard / English Mastiff mix puppy as 8 toddobaad jir ku nasanaya cawska
6 bilood cidhib-buluug ah
shaybaar madow iyo iskudhaf celiska dahabiga ah
pin tzu eyda iibka ah